ဟွာဝေး P8 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
ဟွာဝေး P8 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါဟွာဝေး P8 တစ်ဦးနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေးစမတ်ဖုန်းကဲ့သို့တူညီသောကုန်ကျတဲ့ High-end ကိရိယာ. ဒါဟာအလွန်ပါးလွှာသည်, အလင်းနှင့်သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့, အစိုင်အခဲကင်မရာနှင့်လျောက်ပတ်သော processor နဲ့.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဟွာဝေး P8 ပြန်လည်သုံးသပ်: ပိန်သော, အစွမ်းထက်နှင့်ယှဉ်ပြိုင် undercuts” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 21 မေလအပေါ်များအတွက် 2015 05.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သငျသညျဖြစ်နိုင်သည့် Huawei တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး. တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့်အနည်းငယ်ပြုကြသောသူအများအပြားစီရင်မနိုင်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်သောအရာ, တရုတ်ကုမ္ပဏီပြင်ပမှာဖွံ့ဖြိုးဆဲစျေးကွက်ရုန်းကန်ဖြစ်ပါတယ် - ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ.
၎င်း၏အသစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် P8 Android စမတ်ဖုန်း - iPhone တစ်ခုထက်ပိုမိုပါးလွှာ6- မြေပုံပေါ်တွင်ဟွာဝေးထားရန်အကြောင်းဖြစ်နိုင်.
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမိုဘိုင်းအခြေခံအဆောက်အဦများကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်, နှင့်အသစ်နည်းပညာများ၏အားသာချက်ယူကြောင်း device များအတွက်လူသိများ, ထိုကဲ့သို့သော 4G အဖြစ်, ပဌမ, Huawei ကယခု Google ရဲ့ Nexus စီးရီး၏အောင်မြင်မှုကို mirror နှင့်တစ်ဦးနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေးစျေးနှုန်းမှာတစ်ထိပ်တန်းအဆုံးအတှေ့အကွုံကိုဆက်ကပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်.
သတ္တုကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ချောမွေ့နှစ်ဖက်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးစဉျက iPhone ကိုကဲ့သို့ကြည့်ရှု. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ P8 လူမီနီယံနှင့်ဖန်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ understeer ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်. ဒါဟာနည်းနည်းတစ်ဦးကို iPhone နဲ့တူလှပါတယ်5နောက်ကျောကနေ, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ကျောပန်းကန်ရဲ့ထိပ်မှာအဖြူချယ်လှယ်ကြပြီဖန်ခွက်နှင့်အတူ Argos MyTablet ဆင်တူ.
ကံမကောင်းသဖြင့်, ထိုအကြံအစည်ရှိရပ်တန့်မပါဘူး. ပါးလွှာခြင်းနှင့်ကောင်းစွာလုပ်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, ချောချောမွေ့မွေ့နှစ်ဖက်နှင့်တစ်ဦးအစိုင်အခဲကျောနှင့်အတူ, အလူမီနီယမ်မှ finish ကိုအနည်းငယ်စျေးပေါကြည့်.
တစ်ဦးကိုလက်ညှိုးနှင့်ပုတ်ကြသောအခါနောက်ကျောလည်းဆွန်းအသံ, အိုင်ဖုန်း - အထူ 6.4mm မှာ P8 သွားအပါးလွှာဆုံးဖုန်းတစ်ကြောင်းပေးထားအံ့သြစရာအရာဖြစ်ပါသည်66.9mm နှင့် Samsung ၏ Galaxy S6 6.8mm ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ 5.2in ကို full HD မျက်နှာပြင်ရှေ့အများစုကိုဖြည်, နှစ်ဖက်စလုံးမှာပါးလွှာ bezel နှင့်အတူ. ဒါဟာတောက်ပင်, ပြတ်သားနှင့်ကောင်းမွန်သော. ဒါဟာအတော်လေးအ LG က G4 နဲ့ Galaxy S6 တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်အစိတ်ကူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad HD ကိုမျက်နှာပြင်နှင့်အတူတန်းတူအထိမဖွင့်, ဒါပေမယ့်အလားတူဖန်သားပြင်ကို HTC One ကို M9 မှတပ်ဆင်အဖြစ်အလွယ်တကူအဖြစ်ကောင်းလှ၏, ဥပမာအားဖြင့်.
သေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်ဦး 5.2in screen နဲ့အတူ, အ P8 ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သေးငယ်တဲ့လက်နှင့်လူနေဆဲတယောက်လက်ကိုအသုံးပြုဖို့ရုန်းကန်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း.
Screen ကို: 5.2အပြည့်အဝနဲ့ HD LCD ကိုအတွက် (424ppi)
processor: octa-core ကို Huawei က Kirin 930
ရမ်: 3RAM ကို GB ကို
သိုလှောင်ခြင်း: 16GB ကို + microSD ကဒ်
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 5.0 Emotion UI နဲ့ "Lollipop"
ကင်မရာကို: 13OIS နှင့်အတူလွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာကို, 8အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: dual-SIM LTE ကို, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ဘလူးတုသ် 4.0 နဲ့ GPS
ဒိုင်မန်းရှင်း: 144.9 x က 72.1 x က 6.4mm
နှစ်ဦး Sims တစ်ချိန်တည်းမှာသုံးနိုင်တယ်, သို့မဟုတ်တစ် Sim နှင့်ပိုပြီးသိုလှောင်ကာ microSD card ကို. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Samsung ကလိုပဲ, Huawei က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာဒီဇိုင်းနှင့်စေသည်. ၎င်း၏ Kirin 930 Qualcomm မှနဲ့ Samsung ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်အလားတူအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်လျော့နည်းအစွမ်းထက်ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ.
အဆိုပါ P8 snappy ခံစား, မအတော်လေးအဖြစ်အမြန်အမြန်ဆုံး-feeling Android စမတ်ဖုန်းအဖြစ်လျှင်, က Galaxy S6. စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးပတ်ပတ်လည်အစိုင်အခဲခဲ့သည်, သာအချို့သောသူ့ကို graphically လေးလံသောဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အတူအနည်းငယ် stuttering.
ငါအလွန်အမင်းပူပြင်းရတဲ့ဖုန်းကိုသတိပြုမိတော့မှ, ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ပိန်ပေးထားအထင်ကြီးရာဖြစ်ပါသည်. အညီအမျှအထင်ကြီးပုံကိုဘက်ထရီအသက်ပေတည်း. ယေဘုယျတာဝန်ဖျော်ဖြေ, တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများရာနှင့်ချီအပါအဝင်, အီးမေးလ်က, တွစ်တာ, ဂီတ streaming များနှင့်ကြည့်ရှုခြင်း၏တစ်နာရီ, ငါစွဲချက်အကြား P8 ထဲကအကောင်းတစ်နှစ်ရက်တယ်.
ငါသည်လည်းငါစုံစမ်းပြီဆိုအခြားစမတ်ဖုန်းတွေထက်ပိုမိုအားကောင်း 4G signal ကိုတယ်ထိန်းသိမ်းထားကိုတွေ့.
အဆိုပါစံ P8 သာတည်ဆောက်သိုလှောင်မှု 16GB ရှိပါတယ် (အမြင့်ဆုံးသော-အဆုံးစမတ်ဖုန်းအခု 32GB နှင့်အတူလာ 2015). ဒါဟာမီဒီယာများအတွက်ပိုပြီးသိုလှောင်မှုကိုထည့်သွင်းအဘို့အကာ microSD card slot ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်အလယ်တန်း Sim card slot အဖြစ်နှစ်ဆ, အသုံးပြုသူများသည်နှစ်ဦးကိုဖုန်းနံပါတ်များနှင့်တစ်ဖုန်းပူးတွဲနှစ်ခုန်ဆောင်မှုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု.
dual-SIM ထောက်ခံမှုကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အလုပ်နံပါတ်များနှင့်အတူသူတို့အဘို့အလွန်အသုံးဖြစ်ပါသည်, နှစ်ဦးဖုန်းများသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နေချွေ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဒေသခံတစ်ဦး Sim card ကိုခရီးသွားလာအသုံးပြုဖို့သူတို့အား.
Android မှာ, ဒါပေမဲ့မသင်သိချင်ပါတယ်အဖြစ်
အဘယ်သူမျှမ app ကိုအံဆွဲရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အပေါငျးတို့သ apps များအပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ပစ်ချနေကြသည်, app ကို icon တွေကိုတစ်ဦးအရုပ်ဆိုးရောင်စုံပူဖောင်းအတွက်ဝိုင်းနေစဉ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ P8 တစ်ဦးက Android စမတ်ဖုန်းပြေးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် 5.0 Lollipop. သို့သော် Huawei ကအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကြည့်ဖို့က Android ကိုအထူးပြု, "Emotion UI ကိုက" တောင်းဆို.
အဘယ်သူမျှမ app ကိုအံဆွဲရှိပါတယ်, သောဆိုလိုသည်တိုင်း app ကိုပင်မမျက်နှာပြင်စာမျက်နှာများ၏အပေါ်အတင်းအဓမ္မဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးကို iPhone နဲ့တူတာ. အဆိုပါ app များဖိုလ်ဒါထဲတွင်နေရာရနိုင်နှင့် homescreen ရွေ့လျားနောက်ခံပုံများနှင့် Widgets တွေနှင့်အတူစံက Android လိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်.
အဆိုပါအကြောင်းကြားစာကိုဗန်းကြည့်နှင့်ကွဲပြားခြားနားပြုမူ. ဂျီမေးလ် - တချို့က apps များအများအပြားအကြောင်းကြားစာများရှိ, ဥပမာအားဖြင့်, ပြွတ်အားလုံးမက်ဆေ့ခ်ျအတူတူ, ဒါပေမယ့်အလယ်တန်းအကြောင်းကြားစာတစ်ဦးချင်းစီအသီးအသီးကိုပြသ.
အမျိုးမျိုးသော themes များရရှိနိုင်ပါသည်, သော icon များအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အရောင်များနှင့်နောက်ခံကိုပြောင်းလဲ. အများစုမှာ app ကို icon တွေကိုတစ်ရောင်စုံနောက်ခံများ, တစ်ဦးရှုပ်ထွေးကြည့်ရာ; စံအန်းဒရွိုက်အစားပွင့်လင်းနောက်ခံကိုအသုံးပြုသည်. အခြား app များကိုထုံးစံ icon များရှိ, နည်းနည်းအတိုင်ကြည့်ရှုရာ, ထိုကဲ့သို့သော Instagram ကိုအဖြစ်.
အဆိုပါ P8 သင်ဘက်ထရီဖျန်ဖြစ်ကြောင်း background မှာ app တွေကိုသတ်အကြံပြု. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ P8 ကိုလည်းရမ်မှ apps များရှင်းလင်းရေးအတွက်ဖုတ်အနည်းငယ်ဖုန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tools တွေကိုရှိပါတယ်. ရမ်၏ 3GB installed နှင့်အတူ, သူတို့တစ်ဦး overkill တစ်နည်းနည်းင်, ဒါပေမဲ့သန့်ရှင်းရေးနှင့်လိုသလိုနှင့်အတူစွဲလမ်းသူတို့အဘို့ကောင်းသော.
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာထို့အပြင် app တစ်ခုနောက်ခံအတွက်ဘက်ထရီအားကိုစားသုံးတဲ့အခါသင်ကသတိပေးတဲ့အာဏာကိုမော်နီတာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာ milliampere နာရီအတွင်း apps များ rates - ဘက်ထရီစွမ်းရည်မြှင့်တစ်ဦးအတိုင်းအရှည် - အခါ, မသုံးစွဲ 40mAh ထက်ပိုမိုတစ်ခုကိုမည်သည့် app ကိုပိတ်ပစ်အကြံပြု. တဖန်ဒီ overkill တူပုံရသည်, ဒါပေမဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှနောက်ဆုံးနာရီထွက် eke ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေအတွက်အသုံးဝင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်သူတို့နှောင့်အယှက်ဖြစ်လာလျှင်ထိုသတိပေးချက်များကိုပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်.
ကင်မရာကအစိုင်အခဲသည်နှင့်ကောင်းစွာလုံလောက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်, နှင့် app ကို Apple ရဲ့ iPhone ကင်မရာ app ကိုမှဖြတ်သန်းအကြံအစည်ထက်ပိုမိုပြသထားတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
13-megapixel ကင်မရာလက်ရှိရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာ Samsung ရဲ့ Galaxy S6 သို့မဟုတ် LG က G4 ရဲ့ကင်မရာအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ချွန်ထက်မင်, ဒါပေမဲ့အစိုင်အခဲအနိမ့်အလင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းမွန်သောအသေးစိတ်ရှိပါတယ်.
ကင်မရာ app ကို, သို့သော်, အလွန်ကို iPhone-ကဲ့သို့ဖြစ်၏. လက်ဝဲဘက်တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ဓာတ်ပုံ selector, HDR နှင့်တစ်ဦး menu ကိုနောက်ကွယ်မှသင်ျဂွိုဟျအခြား features တွေကိုတစ်ဝန်ကို enable ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ.
အဆိုပါ front-facing ကင်မရာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အဘို့အစိုင်အခဲအလုပ်မ, ၎င်း၏လှပမှု mode ကိုအချို့သော horrifyingly တပါး-ရှာဖွေနေပုံရိပ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပေမဲ့.
အဟွာဝေး P8 ၏ 16GB version ကိုရှမ်ပိန်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်လာ, £ 360 ကုန်ကျ, ထိုပြိုင်ဘက်အများစုထက်ဝန်းကျင်£ 200 လျော့နည်းသော, Samsung ကအပါအဝင်, LG က, Sony က, HTC နှင့် Apple တို့. Samsung ရဲ့နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေး က Galaxy A5 £ 349 ကုန်ကျ.
အဆိုပါလူမီနီယမ်ပြန်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးစမတ်ဖုန်းများအတွက်မျှော်လင့်ထားမယ်လို့ထက်ကတစ်စျေးသက်သာ finish ကိုရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဒါဟာအစ Dual-Sim စွမ်းရည်နှင့်ကောင်းမွန်သောဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်အရောင်ကင်းမဲ့နှင့် Android ရန်၎င်း၏မလုပ်ပဲတာအကောင်းဆုံးမဟုတ်.
အ P8 နှင့်အတူ, ဟွာဝေးကပေးဆောင်အာရုံစူးစိုက်ရကျိုးနပ်မယ့်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်, နှင့် P8 ဆက်ဆက်စဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်, အထူးသဖြင့်ကပြိုင်ဘက်ထက်သိသိသာသာလျော့နည်းကုန်ကျပေးထား.
အကောင်းအဆိုး: အလွန်ပါးလွှာ, အစိုင်အခဲတည်ဆောက်, လျောက်ပတ်သောကင်မရာကို, ကောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်.
Cons: ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှပရီမီယံ finish ကိုကင်းမဲ့ခြင်း, software ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအနည်းငယ်ကိုလုံးတီးနှင့်သိသိသာသာကို Android ကိုပြောင်းလဲ.
တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ homescreen နှင့် software system ကိုရရှိနိုင်, အစားအစဉ်အလာအဆင်အပြင်များ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
• Samsung ရဲ့ Galaxy S6 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ကို iPhone လူသတ်သမား
• LG က G4 ပြန်လည်သုံးသပ်: ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး phablet တယောက်, တစ်ဦးအထင်ကြီးကင်မရာကိုဝါကြွားခြင်း
• Samsung ရဲ့ Galaxy A5 ပြန်လည်သုံးသပ်: High-end ရူပနှင့်ခံစားနှင့်အတူတစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေးစမတ်ဖုန်း
• LG G Flex သည်2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ငှက်ပျောဖုန်းရဲ့ဒုတိယကြွလာသောအခါ
Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ
← Sony Xperia Z4 Tablet ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ဦးနှောက်ကို implants စက်ရုပ်လက်မောင်းကိုထိန်းချုပ် – အတွေး၏တန်ခိုးနှင့်အတူ →